तेजिला नवीनको ‘करिअर ट्रयाजिडी’
सुन्दर खनाल काठमाडौं - आइतबार, भदौ २८, २०७७
नवीन घिमिरे अख्तियारबाट बिदा भए त के भयो?
यसअघि दीप बस्न्यात र लोकमान सिंह कार्की पनि बिदा भएकै हुन्, अरू अरू पनि यसै गरी बिदा हुँदै आएका हुन्।
बस्न्यात र कार्की जसरी बिदा भए त्यसमा जनता विश्मयभूत थिएनन्। किनभने, उनीहरूले प्रशासनिक वृत्तिभरको कर्मसंस्कार त्यही मार्गमा केन्द्रित गरेका थिए। र, उनीहरू आज पनि आफूले जे ग-यो त्यसमै सन्तुष्ट र मख्ख भएर पन्जाबी भटौरे झैं फूलेका छन्। अकुत कमाई र अत्याचार पचाउन पनि असामान्य क्षमता, ढोंग र वहानाशीलता (यो शब्द यहाँ प्रसंग विशेषको आवश्यकताले ‘कल्पनाशीलता’ भन्ने सकारात्मक शब्दको मर्मबाट अपभ्रंश गरी क्लोन गर्न मन लाग्यो) चाहिन्छ। जुन बस्न्यात र कार्कीमा प्रशस्त रहेछ।
तर, घिमिरे फरक च्यासिसका मेसिन थिए, कम्तिमा ओलीको झल्लर छाता ओढेर टंगाल दरबारको ढोका छिर्नुअघि। सफा धुँवा फाल्ने नेपाली मापदण्डको गाडीजस्तो, करिब–करिब।
गृह मन्त्रालयको रिपोर्टिङ गर्दाताका घिमिरे शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुख थिए। घरैबाट टिफिनमा ल्याएको खाजा खाने बेला पथ्र्यो कहिलेकाहीँ, हामी समाचार खोज्दै उनका कार्यकक्षतिर पुग्दा। उनी शायदै खाजाको बहानाले हामीलाई बाहिर कुराउँथे। सहज ढंगले विषयवस्तुमा कुरा गर्ने, प्रष्टता र आत्मविश्वाससहित। पत्रपत्रिकाका समाचार, लेखलाई पर्गेलेर गफ गर्ने उनको बानी आकर्षक थियो। गृह बिटका नौला मित्रहरूले उनका बोलीपिच्छे समाचारका एंगल पनि भेट्थे।
र, मातहत अधिकृतहरूले ल्याएका टिप्पणीमा उनी ह्रस्वदीर्घ, विन्यास, हिज्जेसमेत मिलाएर सच्च्याउँथे, सपक्क पार्थे।
‘म त सम्पादक पनि हो नि,’ मुस्कान फुस्काउँदै बोल्ने उनको बानीले भएको घमण्ड पनि लुकाउँथ्यो।
घिमिरे गृहसचिव हुँदा नै एकखाले बुझिने बाध्यतामा रहेर एउटा कमजोर निर्णय गरे। हाकाहाकी सुन तस्करी गराउने एक मसुर अधिकृतलाई उनको निर्णयबाट पेन्सन खाएर घर बस्ने सुविधा मिल्यो। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार ठोकियो। बरा घिमिरेले चित्त दुखाउनु भएछ, त्यसमै।
लाग्यो, घिमिर अब थिचिन थाले– धेरै नधसिए चाहिँ हुन्थ्यो।
मुलुकमा ओलीतन्त्रको पहिलो प्रहर सुरु भइसकेको थिएन। तर, तत्कालीन एमाले कोटामा झापा निवासी घिमिरे अख्तियार आयुक्त नियुक्त भए। मुलुक दलीय भागबण्डामै चलेको हो। अख्तियार, अदालतलगायत सबै राजकीय संस्थापनमा भागबण्डाको पजनीलाई सर्वस्वीकार्य संस्कृति बनाउने खेलो लोकतन्त्रकालमा झन नांगिएर आएको छ। यसमा जँच्ने नसक्ने व्यक्तिलाई खास गरी मध्यमवर्गले ‘स्मार्ट’ ठान्दैन, उच्चवर्गले ‘भाग्यमानी’ मा गन्दैन। तल्लो वर्गका लागि त ती अलग ग्रहका प्राणीबराबर रहने भए।
स्वाभाविकै हो, सचिव भएर राम्रा मन्त्रालयको फन्को लाउँदासम्म तेजिला ठहरिएका घिमिरे एमाले–कृपाबाट अख्तियार छिरेपछि समाजमा गहकिलै दरिए। केही महिनामै मुलुकमा ओलीतन्त्रको विजारोपण हुनु उनका लागि सहजता थियो। र, त्यसपछिका घटनावलीले घिमिरेलाई झन्–झन् अनुकूलता थप्यो। राजनारायण पाठकको घुसखोरी, दीप बस्न्यातको रकमी रवैयाले तुलनात्मक रूपले ओभाना घिमिरेलाई निर्विकल्प बनाउँदै लग्यो। त्यतिसम्मका लागि घिमिरे लायक नै थिए। र, ओलीले उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाएर गल्ती नै चाहिँ गरेका होइनन्।
तर, प्रमुख आयुक्तको भारी र घिमिरेको गाँठीबीचको बेमेल छोपेर छोपिने खालको थिएन। अतिभ्रष्ट मूल्यप्रणाली र कथित जनवादको ढोंगमा निर्मित सत्ताको रवैयालाई नियन्त्रणमा राख्न शतरञ्जको एउटा प्युसोले के सक्थ्यो?
एउटा सामान्य कर्मचारीले सधैं आफ्नो मालिक–सत्ताप्रति बफादारिता देखाउन, अनुग्रहित हुन सिकेको–सिकाइएको हुन्छ। आयुक्त नियुक्तिमा राखिएको विशिष्ट श्रेणीको प्रावधान वास्तवमा राजनीति र प्रशासनबीचको एकखाले सम्झौता हो। जसबाट दुवै पक्षलाई पर्याप्त फाइदा पुग्छ, पुगिरहेकै छ। देखावटी प्रजातन्त्रमा शासकहरू आफूलाई प्रश्न गर्नसक्ने नियमनकारी राख्न पटक्कै मन पराउँदैनन्। यसमा न घिमिरे अपवाद हुन् न अरू नै बन्न सक्छन्।
तर, एउटा साधारण कुरो–अख्तियार आयुक्तमा नियुक्त भइसकेपछि महाभियोगबाहेकका उपायले हटाउन त मिल्दैन। नियुक्तिमा भूमिका खेल्ने नेताका स्वार्थभन्दा देश र जनताको व्यापक हितमा काम गर्ने, विधिको शासन बलियो पार्ने जिम्मेवारी आत्मसात गर्ने अवसर पनि त हो। नेता रिसाउलान् तर जनता खुसी भए गजब नि!
अख्तियारमा नियुक्तिले व्यापक सामाजिक अर्थ राख्ने पनि यत्तिले हो। अर्थात्, पद्धतिविपरीत गएर लाभ लिने सार्वजनिक ओहोदाका मानिसलाई ठेगान लगाउने संवैधानिक शक्ति धारण भएका व्यक्ति हुने सौभाग्यलाई सामान्य पदसोपान र आर्जनभन्दा उपल्लो ठानिनु अत्यन्त स्वाभाविक हो।
नेपालमा राजनीतिक दारिद्रय यति चुलियो कि सत्ताशक्तिमा पुगुन्जेलसम्ममा व्यक्ति अनेक दायित्व–बन्धनमा पर्ने देखियो। र, त्यसले कार्यसम्पादनलाई मसिनो तहमा असर पारिरहने। यो समस्याको सबैभन्दा चर्को संक्रमण नेतामा छ। खर्चिलो चुनाव धान्न, वर्षौं–दसकौं कार्यकर्ता पालनको दायित्व बेहोर्न एवं आफ्नै र परिवारको भविष्य सुरक्षण गर्न सधैं धनदौलतकै दबाबमा बस्नुपर्ने वृत्तिले नेताहरूलाई निजी क्षेत्र, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रकै भर गर्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याउँछ। यस्तोमा नेताहरू महत्वपूर्ण नियुक्तिमा आफ्नो लाभ के कति भनेर हेर्ने नै भए। र, यो विषयलाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्ने र सम्बोधन गर्नसक्ने चाहिँ लामो समय सार्वजनिक प्रशासनमा बसेकाहरू नै हुनपुग्छन्।
नवीन घिमिरे एउटा भ्रष्ट–अभिषप्त मुलुकको ठयाक्कै यही गतिविज्ञानमा हेलिएका हुन्। हेलिँदाहेलिँदै यस्तोमा गर्तमा फसे, जहाँ उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको रूपमा बनाएको तुलनात्मक राम्रो छवि पनि गुम्यो। र, उल्टै केही कलंक पनि बोके। एक हजार रुपैयाँ घुसलाई प्रमाणित गर्न नसक्ने उनको अख्तियार अनुसन्धानले ७० करोड रुपैयाँको हाकाहाकी मोलमोलाइलाई छुन सकेन।
ललितानिवास प्रकरणमा उनको अनुसन्धान लाचारीको पराकाष्ठामा प्रविष्ट भयो। जनता कोरोना महामारीले रन्थनिएका बेला भएका तमाम भ्रष्टाचारमा उनी मुकदर्शक भएर बसे। उनले पहिले–पहिले अधिकृतले लेखेका टिप्पणीमा लगाउने रेजा अख्तियारका फाइलमा चाहिँ लगाउन सकेनन्।
बस्न्यात र कार्की लोभ र अहम्को अतिवादले मात्तिएर ‘स्वच्छ र नैतिक छवि’ को प्रावधानलाई धोती लगाउन पुगेका थिए। घिमिरेले चाहिँ राजनीतिक मालिकहरूप्रतिको उपासनामै चाउरिएर मुलुकलाई नैतिक–आपतमा पु¥याए। कार्यकालको उत्तराद्र्धमा उनीमाथि लागेका आरोपमाथि समयक्रमले यथोचित प्रष्टता देला, शायद। तर, उनका हातबाट भएका भन्दा उनले हात नहालेका वा उन्मुक्ति दिएका वा आँखा चिम्लेका विषय–प्रकरणले मुलुक–समाजलाई बढी नोक्सानी पारेको विषय निर्विवाद छ। यो एउटा तेज राष्ट्रसेवकको करिअरमा निम्तिएको ठूलो ‘ट्र्याजिडी’ हो। घिमिरे वस्तुतः त्यसको भागेदार नबनेको भए सँगतिपूर्ण हुन्थ्यो।
रमेशप्रसाद खरेलले आफूमाथि झेल भएपछि केही घन्टामै राजीनामा दिए। उनले अर्को नियुक्ति खोजेका पनि छैनन्, कसैले दिनेवाला पनि छैन। तर उनलाई बाँकी पूरा जीवन मास्क नलगाइकन बिताउने सुविधा चाहिँ मिलेको छ (कोरोना महामारीको अवस्थामा बाहेक)। उनले मनमा लागेको ठाँटिएर बोल्ने स्वतन्त्रता पाएका छन्, जुन केही करोड–अर्ब रुपैयाँले किन्न सकिन्नँ।
तर, सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर अर्को ठूला नियुक्तिमा लोभिने धेरै महोदयहरू राजनीतिक अनुग्रहमा थिचिएर–रित्तिएर कोभिड–१९ सकिएपछि पनि मास्क नलगाइ हिँड्न गाह्रो पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन ठाडो बदमासी गरेका कारणले पनि हुनसक्छ, नाङ्गो बदमासीको साक्षी किनारा बसेर पनि हुनसक्छ।
घिमिरेको दुःखद अख्तियार बहिर्गमनपछि अब ठ्याक्कै अर्को सिलसिला सुरु हुँदैछ, दुई नयाँ निमित्त–नायकहरू ल्याइँदैछन्। ओलीले आफ्ना परम–सेवक पूर्वसचिव प्रेम राई र देउवाले आफ्ना परमपूजक फूली लगाउन नपाएका आइजिपी जयबहादुर चन्दबाट अख्तियारमा रिक्त स्थानम् पुरयत गर्ने लगभग पक्का भएको छ।
यी दुई पात्रबाट घिमिरेभन्दा निकै फरक ढंगमा तर मालिक–सेवा चाहिँ अझ उच्च तहमा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।